Daafaca Real Ee Achraf Hakimi U Goodiyay Xulka Spain %
Daafaca kooxda kubada cagta Real Madrid, wiilka lagu magacaabo Achraf Hakimi, ayaa wuxuu cod dheer ku sheegay inuu xulkiisa Morocco uu yahay mid udiyaarsan islamarkaana ay ka go’an tahay inay meel fiican ay ka gaaraan koobka aduunka.
Laakiin, sheekada xiisaha leh ayaa waxay tahay inay ku Group ay yihiin xulalka kala ah: Spain, Portugal iyo Iran, waxaana halkaan ka cad in La Rojo iyo Portugal ay yihiin kuwa ugu cad-cad inay kasoo baxaan Group-kaan inkastoo ay wax walba dhici karaan.
Laakiin, Achraf Hakimi ayaa wuxuu aaminsan yahay inay awood uleeyihiin inay dhinac ay dhulka udhigi karaan hadii ay yihiin wiilasha calanka ululaya wadanka Moroco, isagoona ugu goodiyay dhigooda inay wac-daro ay dhigi doonan.
“Maya, waxba nagama gelin hadii ay 6-1 kusoo daareen Argentina,” ayuu ku jawaabay Achraf Hakimi, xili uu la hadlay majalada MARCA, markaasoo la weydiiyay hadii sida uu arko in Spain ay 6-1 kusoo daartay Argentina iyo hadii ay ka baqayaan.
“Waan ognahay sida ay u wanaagsan tahay Spain, waa koox wanaagsan oo want, waana ku xishmeynaa midaas, maxaa yeelay waxay noqdeen champion-k aduunka,” ayuu hadalkiisa kusii daray, daafacaan garabka midig ka dheela.
“Xaalad walba oo lagu jiro, waxaana isku deyi doonaa inaan la dheelno kulan wanaagsan oo adag waliba,”ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Achraf Hakimi oo noqonaya laacibkii ugu da’da yaraa ee Real Madrid, ka tirsan kaasoo koobka aduunka ka qeyb qaata.